Mividy ny fiara nampiasaina dia mety ho sarotra. There are a few things that you can check yourself to ensure that you are getting a good vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buying a used vehicle is the engine crank case oil. Amin'ity lahatsoratra ity dia handrakotra ny fomba hanamarinana azy ireo, ary inona no mba hitady.
Ny zavatra voalohany indrindra tiantsika ny hijery, rehefa mijery mihoatra ny fiara ampiasaina dia ny maotera menaka. Ny iray amin'ireo zavatra tiako atao dia mandeha aloha ary mipetraka ao anaty ny fiara, ary mitady ny fanovana farany menaka marika famantarana avy amin'ny solika fanta-daza fiovana orinasa. Jereo ny daty sy ny mileage fa niova, ary koa mijery ny mileage fa amin'izao fotoana izao ny odometer mamaky. Ataovy azo antoka fa tsy lasa noho ny na ny mileage sy ny daty. Jereo ihany koa ny mba hahazoana antoka fa ny diloilo izay eo voasoratra ao amin'ny taratasy mandraikitena mifanaraka ny lanjan'ny ihany diloilo izay natolotry ny mpanamboatra. Ny ankamaroan'ny fotoana dia mora ny hamantarana ny zavatra marina no lanjan'ny diloilo ny mijery fotsiny ambanin'ny ronana. Tena mpanamboatra lisitra izany tao an-crank voky menaka raharaha satrony na manana taratasy mandraikitena sasany izay ambanin'ny ronana izay manome ny vaovao.
Koa dia mila manontany ny tompony raha toa ka mampiasa sentetika menaka na mahazatra. Ny antony dia indray mandeha fiara no nanana solika sentetika ampiasaina amin'ny raharaha crank dia heverinareo ianao hanohy mampiasa sentetika mba tsy lubrication olana. Ny sasany fiara vaovao izao avy amin'ny sentetika diloilo no ao amin'ny crank raharaha avy amin'ny orinasa, ary hisy ny taratasy mandraikitena ambanin'ny ronana na eo amin'ny fototra fanohanana milaza aminareo fa afaka ny fiara ihany no sentetika menaka nampiasaina ao aminy. Zavatra iray mba hahatsiaro ny synthetics dia fa ho lany be kokoa ianao, rehefa manana ny diloilo fanovana. Ny menaka fiovana amin'ny menaka tsy tapaka hitentina $20 ny $25, raha ny menaka fanovana amin'ny synthetics hitentina $50 ny $80 arakaraka ny fomba menaka be ny crank raharaha mihazona.
Manaraka, te-handeha mialoha ka mamoha ny ronana. Toerana ny raharaha crank motera mandroboka tapa-kazo. Mazàna ireo tapa-kazo mandroboka manana tahony mavo na mbamin'ny kiboriny. Manana rag aminao. Mandehana mialoha ary hanaisotra ny mandroboka tapa-kazo sy namaoka azy eny. Then reinstall the dip stick and pull it out again and check to see that the oil is in the recommended range. Ny dipsticks manana karazana ny marika eo ireo milaza ny azo antoka fandidiana raharaha isan-karazany ny crank menaka. Ataovy ny sasany amin'ny diloilo eo amin'ny rantsan-tananao, na raha ny rag ianao dia fotsy, mandeha mialoha ny maka tsara ny mijery izany. Inona no loko no? Ao amin'ny motera iray izay manana 150 arivo kilaometatra na latsaka, dia tokony hanana fara fahakeliny, somary ny volamena niseho ho azy. Raha kely maloto dia ekena, indrindra fa raha toa ka manakaiky ny fotoana mba hanova ny menaka indray.
Manaraka, manimbolo ny menaka ( Fantatro fa toa mampihomehy, fa matoky ahy). Tsy tokony hanana fanatitra ankasitrahana ho azy. Tsy tokony hanana entona ankasitrahana ho azy na. Raha fofona toy ny manta mandatsa-dranomaso, Avy eo misy ny olana amin'ny rafitra ny solika sy ny mety ho fanariana manta solika an-crankcase. Na izany ny ankamaroan'ny fotoana dia Niainga ny maso maotera fahazavana.
Nanamarina ny menaka motera dia iray amin'ireo zavatra maro izay tsy maintsy teny mba antoka fa ianao mividy fiara ny tsara kalitao. Raha tianao ny hahafantatra bebe kokoa momba ny zavatra mba hanamarinana sy ny fomba tsara indrindra mba hanamarinana azy ireo, mamangy ny namany Sary @ KNWAutobody.com
Tags: Nanamarina maotera menaka